Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ªº Zom-pirenena amin'ny fananana trano ªº
Ofisialin'ny governemanta amin'ny zom-pirenena faharoa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Zom-pirenena sy pasipaoro ao Saint Kitts sy Nevis + zon'ny fitsidihana tsy misy visa any amin'ny firenena 155
Zom-pirenena sy pasipaoro any Antigua sy Barbuda + fitsangatsanganana tsy misy visa any amin'ny firenena 150
Zom-pirenena sy pasipaoro an'i Saint Lucia + zon'ny fitsidihana tsy misy visa any amin'ny firenena 146
Zom-pirenena sy pasipaoro ao Grenada + zon'ny fitsidihana tsy misy visa any amin'ny firenena 140
Zom-pirenena Dominikana sy pasipaoro + zon'ny fitsangatsanganana tsy misy visa any amin'ny firenena 120
Fotodrafitrasa tena tsara sy ny natiora tsara indrindra. Seranam-piaramanidina mpisolo toerana hafa.
Fandaharana tranainy sy marin-toerana indrindra, firenena farafahakeliny tsy misy visa,
Ny programa mahasoa indrindra any Karaiba. Paradisa ho an'ny Yachtsmen.
Zom-pirenen'i Dominica ho an'ny fizarana miafina Bay
Ny zom-pirenenanao Dominica avy any Secret Bay
Mpivarotra: AAAA ADVISER
Ao amin'ny havoana tampon-tampon-kavoana no ianjadian'ny ala mikitroka amin'ny ranomasina any Dominica, "Island of Nature" any Karaiba, Secret Bay dia iray amin'ireo toeram-pivarotana fivarotana lehibe ary hotely efa niorina. Ny trano fandraisam-bahiny misy kintana enina mitokana dia misy villa miendrika fomba feno trano mirindra, samy manana dobo filokana manokana sy tompona villa tsirairay avy, mpiambina onjam-peo antso, chef ary mpitari-dalana, fidirana amoron-dranomasina miafina ary fanovana namboarina manokana. isaky ny vahiny.
Namboarin'ny mpanao maritrano malaza Fruto Vivas, ilay Secret Bay Villas izay nahazo loka dia malaza manerantany noho ny fifangaroan'ny kanto amin'ny haingo kanto sy ny asa-tanana eo an-toerana. Mamorona fonenana malalaka eny an-kalamanjana izy ireo eo afovoan'ny tontolo voajanahary maitso. Green Globe voamarina ary namboarina tamin'ny fitaovana maharitra, Secret Bay Resort dia mamaky ny fandanjana tanteraka ny andraikitra amin'ny tontolo iainana sy ny fampiononana ho an'ny vahiny.
Ireo kojakoja lafo vidy ao amin'ny Secret Bay Resort dia mameno ny fialan-tsasatra tsy manam-paharoa an'ny nosy. Atombohy ny andronao amin'ny yoga mamelombelona eo amoron'ny renirano Bwa Mang Wellness Pavilion, mahita fiadanam-po ao amin'ny Treetop Gommier Spa, misakafo amina fisakafoanana misokatra misokatra ao amin'ny Zing Zing Restaurant tsy misy menio, ary farano amin'ny cocktails eny amin'ny hantsam-bato ny takarivanao. Vetiver Sunset Deck izay mijery ny Beach miafina. Tena paradisa hita io.
Na ny ao anatiny sy ny any ivelan'ny toeram-pialan-tsasatra, fomba fijery isan-karazany sy fanovana fiainana no miandry anao. Na misafidy ny handeha “an-tsehatra” miaraka amin'ireo mpitsabo manam-pahaizana aminay ianao, mizaha ny ala velona, ​​miaina ala mikitroka na midina any amin'ny halalin'ny nosy amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana amin'ny riandrano, dia omena toky ny vahiny hiala ao Dominica fa niova mandrakizay.
Fanolorana trano sy tany Karaiba tokana, famoriam-bokatra villa miorina amina trano hazo miorina amin'ny havoana mahatalanjona mitazana ny Ranomasina Karaiba.
NY TRANO TRANO voajanahary indrindra any DOMINIKA + PASSPORT DOMINIKA ANAO
Secret Bay, trano fandraisam-bahiny malaza Relais & Châteaux ary trano fialantsasatra # 1 any Karaiba ho an'ny Travel + Leisure, dia efa nalaza noho ny fifangaroan'ny kanto amin'ny famolavolana avo, ny asa tanana ao an-toerana ary ny traikefa vahinin'ny tena izy mifanaraka amin'ny safidin'ny tena manokana. Ity toeram-pialantsasatra misy kintana enina ity dia mitondra fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa ary fankasitrahana manerantany ho an'ny The Residences at Secret Bay, fanolorana fananana any Karaiba voafetra misy villa sy trano mahavariana maritrano miisa 42 ao anatin'ny Helodrano miafina. Eto ianao dia hahita fotoana tsy fahita firy mividy trano fialan-tsasatra mihaja ara-tontolo iainana, miaraka amina serivisy fampiantranoana tsy manam-paharoa sy ireo kilasy an'izao tontolo izao - any Dominica no misy azy, iray amin'ireo nosy tsy dia be mponina, mahatsiaro tontolo iainana ary manankarena kolontsaina ao Karaiba.
Eto ianao dia hahita fotoana tsy fahita firy mividy trano fialan-tsasatra mihaja ara-tontolo iainana, miaraka amina serivisy kintana enina tsy manam-paharoa sy ireo kilasy an'izao tontolo izao - izany rehetra izany dia miorina amin'ny iray amin'ireo nosy tsy dia be mponina, mahatsiaro tontolo iainana ary manankarena kolontsaina ao Karaiba.
Trano fandraisam-bahiny mitokana amin'ny zaridaina manokana, zaridaina, dobo filomanosana, hazo tropikaly ary famaranana maoderina
Tongasoa eto amin'ny fidirana amin'ireo fampitaovana sokajy manerantany sy serivisy kintana enina.
Fananana tsy misy ahiahy miaraka amin'ny fitantanana trano sy programa fanofana mahomby.
CONVENIENCES SY FIAINANA BAIBOLY miaraka amin'ny DOMINICA CITIZENSHIP
Tora-pasika mitokana 3 afaka milomano
Trano fanatanjahantena ao Zamann amoron-dranomasina
Dobo tsy manam-petra miaraka amin'ny ranomasina, fisotroana amoron-dranomasina, trano fisakafoanana ary cabanas *
Ivotoerana fanaovana spaoro maoderina sy klioban'ny ankizy *
Galerie Art Curated & Mini Brewery *
Lava-dranomasina eo amin'ny toerana, lalan'ny natiora ary
Fahagagana voajanahary amin'ny "Nosy voajanahary"
* Ho aseho amin'ny 2021.
Tompon'ny villa voatokana
Cooks amin'ny antso
Mpitari-dia any ivelan'ny trano
Fitantanana sy fikojakojana ny fanananao
Fidirana Wi-Fi haingam-pandeha
Fitaovana fitsangatsanganana ao anatin'izany ny kayak, tabilao miorina, tsihy yoga ary fitaovana snorkelling.
Tehirizo ny villa alohan'ny hahatongavany
Ny zom-pirenenananao faharoa afaka 60 andro
Fahafahana manova ny anarana sy ny anaram-bosotra amin'ny fonenan-ketra
Ny orinasanay dia manana fahazoan-dàlana ofisialin'ny firenena ary miorina amin'ny tranokalan'ny governemanta
Ny renivohitray nahazo alàlana dia mihoatra ny 40 tapitrisa robla - natao ho filaminan'ny sainao izany
Tsy fandavana tokana mandritra ny fotoana niasan'ny orinasanay. Hainay ny miasa amin'ny tranga sarotra indrindra
Ny zom-pirenenananao ho an'ny trano sy tany
Fidiram-bola 3% + Mety ho fialan-tsasatra lafo vidy
Antigua sy Barbuda Citizenship ho an'ny Bouganvillea Condominium Share
Antigua sy Barbuda mizaka ny zom-pirenena Rendezvous Bay Share
Ny zom-pirenenan'i Montenegro (Montenegro) amin'ny fahazoana anjara na fananana iray manontolo. Pasipaoro 2000 fotsiny.
Ny zom-pirenenan'i Montenegrin ho an'ny anjaran'ny Westin Ski Resort Kolašin
Ny zom-pirenenan'i Montenegro amin'ny anjaran'ny Montenegro Breza Hotel And Spa
Ny tena mahaliana anao:
Misy safidy maro hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa. Ny sasany sarotra, ny sasany kosa tsotra. Miankina amin'ny fitsipiky ny fifindra-monina ny ...
9 Mey 2021
Ahoana no hamaritana ny toerana honenana tsara indrindra eto an-tany? - avy amin'ny zavatra niainako manokana, niaraka tamin'ny fanampian'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny cosmopolitans hafa sy fikambanana manam-pahaizana manokana ...
Firy ny zom-pirenena avela any Russia no fehezin'ny andininy faha-62 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana. Ny lalàna fototra dia tsy mandrara ny zom-pirenena maro. Ao amin'ny fiambenana ...
Fandoavam-bola $ 25000 - Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola
Fiantohana $ 12500 - Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola
Fiantohana $ 10000 - Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola
Inona no mahaliana anao?
Zom-pirenena momba ny fampiasam-bola
Fananana hahazoana zom-pirenena:
Saint Lucia trano sy tany
Saint Kitts sy Nevis Real Estate
Antigua sy Barbuda Real Estate
Montenegro trano sy trano
Real Estate Karaiba
Ho an'ny olom-pirenenan'i Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan: VNZ.SU
↑ Zom-pirenena Vanuatu ↑ Zom-pirenena Grenada ↑ Zom-pirenena Dominica ↑ Zom-pirenen'i Saint Lucia ↑ Zom-pirenen'i Saint Kitts sy Nevis ↑ Antigua sy olom-pirenena Barbuda ↑ Zom-pirenena Bolgara ↑ Zom-pirenena Tiorka ↑ Trano fivarotana fahagola amidy